Athini amaxabiso kwimarike yaseSpain echaphazelekayo yiBrexit? | Ezezimali
Kuyaziwa ukuba iBrexit ligama eliqulunqelwe ukubhekisa ekuphumeni kwe-United Kingdom kwi-European Union. Kodwa yintoni ngamanye amaxesha engaziwayo ngabatyali mali abancinci nabaphakathi ubudlelwane bezinkampani zaseSpain kwaye zidweliswe kwisalathiso esikhethiweyo yee equities zesizwe ezinokuchaphazeleka ukuba le nkqubo igqityiwe ukugqitywa. Kungenxa yokuba inokunika ngaphezulu kwesikhombisi esinye ukusukela ngoku ukuya phambili, izikhundla ziyathathwa okanye hayi kolunye ukhuseleko oludityanisiweyo kwimarike yaseSpain eqhubekayo.
Ewe kukho uluhlu oluninzi, kwaye ikepusi ephezulu kwaye ngobunzima obuthile kwi-Ibex 35. Oko okwangoku kungachaphazeleka kulungelelwaniso lwamaxabiso abo ukwenza le nkqubo yezopolitiko nezentlalo. Ukuya kwinqanaba lokuba inokuzisa i-euro ezininzi kwimisebenzi esiyenzayo kwiimarike ze-equity ukusukela ngoku. Ingakumbi ukuba, njengesiphumo seBrexit, inokukhokelela kwiinkampani ezidwelisiweyo ukuba ziphuhlise imeko esezantsi. Apho siya kuba nawo onke amathuba okusishiya i-euro ezininzi apha endleleni.
Kule meko ngokubanzi, kulunge kakhulu ukuthathela ingqalelo iinkampani nge umdla wezoshishino kunye nezorhwebo eGreat Britain. Kungenxa yokuba, kukho iqela leenkampani ezidwelisiweyo ezinobukho bazo kwilizwe lase-Anglo-Saxon elinamandla kwaye elinokuba nefuthe kwi-United Kingdom eshiya i-European Union. Ukuba bekunje, akukho mathandabuzo ukuba ukwehla kwexabiso kwiimarike zezabelo kuya kuba yinyani ukusukela ngalaa mzuzu ukuya phambili. Ngokuwa okubonakalayo kokudityaniswa kwamaxabiso abo kwaye kunokubathatha baye kumanqanaba asezantsi kakhulu kunalawo acatshulweyo ngalo mzuzu.
1 IBrexit: Iberdrola
2 USantander ubhenceke kakhulu
3 I-Inditex iyakuyiqaphela
4 IAG ichaphazeleke kakhulu
5 Ubukho obomeleleyo beFerrovial
6 Iintshukumo ezandayo zikaSabadell
Inkampani yombane inokuba yenye yezona zichaphazelekayo ukuba ukuphuma kwe-United Kingdom kwi-European Union kugqityiwe. Ukongeza, kwezi ntsuku kuye kwaphuma iindaba kumajelo osasazo malunga neenjongo zamalungu e-English Labour Party yokwenza ukuba iinkonzo zelizwe zibe yinxalenye yesizwe saseYurophu. Inyani, ukuba yenzekile, iya kuba sisibetho esomeleleyo kwimidla yoku i-blue chip yee-equities zesizwe. Ngeempembelelo ze-bearish kakhulu kwixabiso layo elinokuthatha phakathi kweyure enye ukuya kwi-XNUMX kwixabiso layo.
Ngaphandle kwento yokuba icandelo lobuchwephesha benkampani yombane yaseSpain ayinakulunga kuba ihlala ikwelona nani lifanelekileyo kwimarike yemasheya kwaye ayikho enye ngaphandle kokunyuka simahla. Ngokufanelekileyo, ngaphandle kokuxhathisa ngakumbi ngaphambili yintoni enokusenza sibone ukunyuka okungaphezulu ekwakhiweni kwamaxabiso abo. Ngaphaya kokuqwalaselwa kwayo kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Kodwa ukubuya, iya kuba lelinye lamaxabiso achaphazeleka kakhulu ekuphumeni kwe-United Kingdom kwi-European Union.
USantander ubhenceke kakhulu
Olunye ukhuseleko olunokubhengeza okukhulu kule nyaniso yentlalo yiBanco Santander. Kuba, eqinisweni, iqumrhu elongameleyo UAna Botín unomboniso ngaphezulu kwe-11% ukuya e-UK. Oko kuthetha okuninzi malunga nokusebenza kwaye oku kungarhuqa phantsi ukusebenza kweziko lezemali kwiimarike ze-equity. Ayothusi into yokuba ikwanayo nebhanki yenkxaso eScotland kwaye ukumka kwe-United Kingdom kwi-European Union kuya kuqatshelwa kwingxelo yayo yengeniso.
Ke ngoko, ayizukukhetha ngaphandle kokusebenzisa ulumkiso olukhulu kuqikelelo lwale nkampani ukujoyina iphothifoliyo yethu elandelayo yestokhwe kule minyaka imbalwa izayo. Kuba ungawucaphukela lo msitho onokuthi uvele nanini na. Ukongeza, kwimeko ebuthathaka kakhulu kwizabelo zayo kwaye oko kukhokelele ekubeni kuvavanywe amanqanaba asondele kwii-euro ezingama-4 ngesabelo ngasinye. Ukuba uyipasile, unokulungisa indawo yakhe nangakumbi kwaye angandwendwela Ingqongileyo kwii-euro ezingama-3, elona nqanaba lisezantsi kule minyaka idlulileyo.
Nangona ubuncinci, i-Inditex ayinakulunga kule meko intsha iseYurophu. Kungenxa yokuba asinakulibala ukuba ikhonkco lempahla linamaziko amaninzi avulekileyo kwizixeko eziphambili zamaNgesi kwaye ke ngekhe likhuseleke kulo mlinganiso. Ngelixa kwelinye icala, i-Inditex inokuqaphela ukwehla kokhenketho kwilizwe, apho ineendawo zokuthenga ezingaphezulu kwe-100. Nangona kuyinyani ukuba ukwahlukahlukana kulawula iqhinga lazo lezorhwebo kunye neshishini. Ngobukho obuphezulu kakhulu phantse kuzo zonke iindawo zehlabathi.
Nangona ifuthe layo kwintengiso yesitokhwe lingangaphantsi, akucebisi ukuba ungabujongeli phantsi obu bukho, obunokuthi buzise ukusikwa okutsha kwinkampani eyolukiweyo. Kwimizuzwana embalwa kwinto edlalayo ibe kwenye okanye kwenye imeko. Ngeemarike zokulingana ngokuchasene nomdla wabo, njengoko kubonisiwe kwiiseshoni zokurhweba zamva nje. Ngayiphi na imeko, kuya kufuneka unike ingqwalaselo ukuvela kwamaxabiso abo kwiimarike zezemali. Unikwe ithuba lokuba abe lixhoba elitsha lokumka kwe-United Kingdom kwi-European Union.
IAG ichaphazeleke kakhulu
Kodwa ukuba kukho ixabiso elinokuvela ngokukubi kule meko, ngaphandle kwamathandabuzo inqwelomoya yaseYurophu. Kungenxa yokuba i-IAG ngendlela ethile iyarhweba nolu tshintsho lunokwenzeka eGreat Britain. Ngokuvezwa okungathandabuzekiyo kumngcipheko wemali, ngaphezulu kuthathelwa ingqalelo ukuba uqikelelo lubeka ukwehla kweponti ukuya kuthi ga kwi-1,23 okanye i-1,24 xa ithelekiswa nedola yaseMelika. Ngapha koko, ukuba i-IAG ayikhange isebenze ngcono kwiimarike ze-equity, bekulungile ngenxa yesi sizathu. Oko ngokungathandabuzekiyo kuye kwahlutha inxalenye elungileyo yabatyali zimali bayo abancinci nabaphakathi ekuthatheni izikhundla.
Iya kuba lelinye lamaxabiso anokuwela kakhulu kwiimarike zezemali kwaye ngubani owaziyo u-sim ukuba abuyele kwi-quote amanqanaba asondele kwi-5 euro. Ujongene nale meko ixhalabisayo, esona sicwangciso silungileyo sotyalo-mali ngeli xabiso kukungabikho kwizikhundla zakho. Nokuba iyaxabisa kwiintsuku ezimbalwa ezizayo njengoko kunokuba ngumgibe omkhulu kwi-bearish. Lixabiso apho kungekho mathandabuzo okuba ulahlekelwe kokuninzi kunenzuzo kwaye oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuze ungenzi iimpazamo ukusukela ngoku. Ngenxa yokuba ungahlawula kakhulu.
Ubukho obomeleleyo beFerrovial
Kukwafanelekile ukukhankanya ukuba iFerrovial ifunyenwe phantse i-20% yengeniso yakho yase-UK. Ilawula indawo ebalulekileyo kwisikhululo senqwelomoya iHeathrow kunye ne-50% yeSouthampton, eAberdeen naseGlasgow. Ke ngoko, kusengqiqweni ukuqonda ukuba iya kuba lelinye lamaxabiso achaphazelekayo ekuphumeni okubonakalayo kwe-United Kingdom kwi-European Union. Apho ucwangcisa ukwenza iikhontrakthi ezintsha kule ndawo. Kwaye konke ukuba yenye yezona zinto zibheja kakhulu ngaphakathi kwesalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe. Kodwa kuyo nayiphi na imeko, kutyhilwe kakhulu kule nyaniso yezentlalo enokuthi isindise iiakhawunti zabo zeshishini kwiikota ezimbalwa ezizayo.
Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba lo makhi unokuba novakalelo kakhulu kwimpembelelo enokubakho yomngcipheko wemali. Iya kuba yenye yezinto ezinokuthi zichasene ukusukela ngoku ukuya phambili. Kwaye yintoni enokukuthatha ukuba yakho ukunciphisa amaxabiso zazinzulu kakhulu. Ayothusi into yokuba yenye yeenkampani ezixabise kakhulu kule minyaka idlulileyo. Ngaphandle kokwenza naluphi na ulungiso ekuhambisaneni namaxabiso abo. Ngenye yeasethi yemali ekufuneka uyijongile kule meko ivula eGreat Britain.
Iintshukumo ezandayo zikaSabadell
U-Banco Sabadell ulibeke ilizwe lase-Anglo-Saxon embindini wezicwangciso zakhe zeshishini kwaye angayihlawulela le nto ukuba i-United Kingdom ekugqibeleni iyishiya i-European Union. Ngapha koko, ngokungafaniyo namanye amaxabiso akhankanyiweyo kweli nqaku, eli qela lezemali lelona Eyona nto ibaluleke kakhulu kwezobuchwephesha Unayo yonke. Ukuya kwinqanaba lokuba liye kumanqanaba asondele kakhulu kwiyunithi enye ye-euro. Ngale ndlela, kunokuthiwa bohlwaywe kabukhali ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi. Kwaye ke ukuwa akunakuba namandla kakhulu ukusukela ngalaa mzuzu ukuya phambili.
Nangona ngenxa yemeko yayo yangoku kwimarike yemasheya, ayisiyokhuseleko olungumxholo wemisebenzi yethu yemarike yesitokhwe. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kufuneka singabikho kuyo nayiphi na intshukumo enokonakalisa umdla wethu kwicandelo lotyalo-mali. Kuba njengoko kuthengiswa ngaphantsi kweyunithi ye-euro, kuya kuthatha umgudu omkhulu ukuphuma kulawo manqanaba. Apho unokulahlekelwa yimali eninzi ekusebenzeni. Nokuba uthini na umkhethe ngokubhekisele kwimo yexesha elifutshane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Athini amaxabiso kwimarike yaseSpain echaphazelekayo yiBrexit?